Izihloko | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Indlela yokuhlukanisa uju nobunikazi bezinyosi bezinyosi zasendle
Ngisho nomuntu ongenandaba namaswidi, ekuqapheliseni izinzuzo zobusi, ngezinye izikhathi uzothenga imbiza ukuze avuselele amabhethri akhe futhi athuthukise umzimba wakhe. Kodwa bambalwa abantu abazi ukuthi kukhona olunye uhlobo lwale mkhiqizo owusizo omangalisayo. Kungenxa izinyosi zasendle honey. Yebo, yebo, yilo kanye le dessert ukuthi bonke bathanda uthando kakhulu.
Izakhiwo eziwusizo ze-lungfish
I-Medunitsa - ingenye yezitshalo ezimbalwa, izakhiwo eziwusizo zazo eziqinisekiswa yizo zombili izidakamizwa ezingavumelani nezomthetho. Kodwa ngaphandle kwalokhu, i-medunitsa iphinde isetshenziswe ekuphekeni, okwenza kube ngumakhelwane obaluleke kakhulu embhedeni wembali nangengadini. Ukwakhiwa kwamakhemikhali we-lungwort ezweni lakithi ukuthola i-lungwort endaweni yemvelo kulula, kepha abalimi bavame ukuzisakaza ngeziza zabo.
Indlela yokukhulisa i-lungfish, imithetho yokukhula nokunakekela imbali
Ukuhlelwa kwensimu eduzane ne-dacha kuvame ukuhlinzekela ukutshala izitshalo ezihlukahlukene zokuhlobisa. Ngeshwa, iningi labo liyakuthanda ilanga futhi limile nje emthunzini. Kodwa kuthiwani uma iningi lesayithi likhona ngqo emthunzini? Impendulo ilula - tshala iphawort. Izimbali zalo ziyoba umhlobiso omuhle kunoma yiliphi ingadi, futhi kulula ngokunakekelwa kuyokuvumela ukuthi ungachithi isikhathi esiningi kule simila.
Ukunakekela i-wallot flower
Umbala othakazelisayo we-vallota onombala ogqamile ogqamile uzoba umhlobiso omangalisayo kunoma iyiphi ikhaya. Lesi sitshalo asizithobeki ekunakekeleni, asidingi izimo ezikhethekile zendawo yokuhlala, ngakho kulula ukukhula ekhaya. Incazelo Vallota, noma njengoba kuthiwa nangokuthi "i-lily fire", isitshalo sezitshalo ezishisayo sekhaya lase-Amaryllid, elihlala eNingizimu Afrika.
Ukuqala kwabalimi bembali ngokushesha noma esikhathini esizayo babhekene nenkinga yokubonakala koqweqwe olucwengekile lwe-substrate ebhodweni, futhi ngokuvamile lokhu kubangela umuzwa wokukhathazeka ngezitshalo zasendlini. Eqinisweni, lesi simo somhlabathi akuyona inkinga enkulu engalimaza kakhulu lesi sitshalo, kodwa izici zesikhonzi ziyingozi.
Indlela ukupheka iklabishi nge izaqathe eKorea ebusika
I-Korea yasekhaya yaseKorea igxila kancane kancane etafuleni lethu, ngokulahlekelwa kancane kancane isimo sayo esiyingqayizivele. Namuhla, i-tapas ingatholakala ezitolo ezikhethekile, nasemasitolo ezinkulu, nakwezimakethe zokudla. Futhi isaladi ezivundiwe kuyisiphuzo esihle, futhi kuhlangene namazambane abilisiwe noma abomisiwe aphenduka isidlo sakusihlwa.
Indlela yokuvala i-currant ebomvu i-compote ebusika
Ebusika, umzimba ubhekene nokuntuleka kwamavithamini, futhi ukuze siphinde siphethe ukunikezwa kwawo, siyajabula ukuvula izikhala zehlobo: ama-compotes, amajusi, ama-jams, alondoloza, ama-jellies. Okwamanje, ngo-jam, i-20% yesilinganiso sokuqala se-vitamin C izohlala, kuyilapho ukulungiselela ama-berries kungabonakali ekushiseni futhi kulondoloze amavithamini kangcono, ngaphandle kwalokho ukushisa okwesikhashana kuhloswe ekukhipheni umoya kusuka kumkhiqizo nokubhubhisa uhlelo lwe-enzyme olufaka ama-vithamini ohlelweni.
IsiFulentshi sibeka i-hens barbezie
Isikhathi esidala saseFrance sezinkukhu zaseBarbados sekuyisikhathi eside sinezinhlonipho zabalimi baseRussia. Futhi akumangalisi, ngoba inyoni yangaphandle ayizinzuliso ekunakekeleni, isheshe ishintshe isimo sezulu esibi futhi inikeza inyama ehlukile ngempela, enomnandi. Sifunda kabanzi ngakho. Isizinda sangokomlando Izinkukhu zeBarzeze zaqala ukuvuthwa emakhulwini eminyaka adlule edolobhaneni elincane laseFrance laseBarzezieux.
Amazambane "Tuleyevsky": izici, ukulima agrotechnics
Amazambane "Tuleyevsky" - ezihlukahlukene-eziyinhloko emasimini osomabhizinisi kanye nemindeni yangasese. Kuyathela kakhulu futhi kulula ukuyihlanza. Umvuno wezimpande awudingi izimo ezikhethekile zokulima, kepha ngeke kube buhlungu ukutadisha zonke izici zezinhlobonhlobo kusengaphambili. Umlando wokuzalanisa Izinhlobonhlobo zakhiwe ngabalimi be-Kemerovo Research Institute (eSiberia).
Indlela yokusika ngokucophelela utshani?
Utshani obunamanzi emgqabeni okhanyayo kuwuhle kakhulu ukuthi abanikazi abaningi bendawo yokuhlala emakhaya kanye ne-dacha bazama ukufeza. Kodwa-ke, akuwona wonke umuntu ongabhekana nokubhekana nezinwele ze-"haircut", futhi isizathu sokuhluleka ngokuvamile kuvame ukukhetha okungalungile kwamakhasimende asetshani. Izici zamakhasimende ezintshontsha zanamuhla Izindlela zokusika utshani, kufaka phakathi ukhula, zinamaqembu amaningana, aklanyelwe ukusebenza ezindaweni ezahlukene.
I-Dracaena deremskaya: izindawo eziwusizo nezici zokunakekela ekhaya
Izakhiwo zokuhlobisa i-dracaena zisetshenziswe ngempumelelo ukuhlobisa izindlu zangaphakathi nehhovisi. Enye yezilwane ezihlakulelwe ngempumelelo ekhaya, ingumdlalo we-drama dracaena, odume ngokungathobeki kwawo kanye nokukwazi ukuhlanza umoya ekamelweni, ukuwusindisa ebuchosheni nasezilwaneni ezinobungozi.
Izici zokuvuna i-Celery
Namuhla, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi ngokuphindaphindiwe sisetshenzisiwe hhayi nje kuphela njengenye eyengeziwe, kodwa futhi isiko lokudla esiyinhloko. Lesi sitshalo singagcwalisa umzimba ngezinto eziningi ezibalulekile, futhi sikwanelise ngokuphelele indlala. Ngesikhathi esifanayo, ikhwalithi yesitshalo incike kakhulu emkhosini wezinqubo zokuvuna kanye nokuzikhethela kule nkathi enhle.
Kungenzeka yini ukutshala isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi ekhaya efasiteleni?
Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi ungenye yemifino ewusizo kakhulu, futhi unesizotha ekunakekeleni. Kulula ukukhula ekhaya embizeni. Indlela yokwenza kahle, funda ngezansi. Izinhlobo kanye nencazelo yesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi Kunezinhlobo ezintathu zesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi: Umsuka - kusukela ngonyaka wokuqala wokulima, isitshalo sakha imifino emikhulu enesisindo esingu-1.5 kg.
Izici zomfula omnyama we-cumin: izinzuzo nokulimaza emzimbeni womuntu
Imbewu ye-cumin ebomvu kanye nofulawa kubo, okwezinye zezinongo zasendulo kanye nemithi, kuyadingeka kokubili emigameni yokudla kanye nezinhloso zokwelapha ngenkuthalo futhi yonke indawo. Funda kabanzi ngalokhu umkhiqizo onguchwepheshe ongazifunda ngokuqhubekayo kulesi sihloko. Incazelo ye-Black Cumin Seed Ezincane, imbewu emnyama ebomvu yalesi siko ikhuphula iphunga elikhunjulwayo, linalo ukunambitheka okubabayo futhi ngesikhathi esifanayo sinambitheka esiphundu.
Umehluko phakathi kwe-anise ne-anise
I-anise yezinkanyezi kanye ne-anise yizinongo ezisetshenziselwa kakhulu ukupheka, imithi kanye ne-cosmetology. Kuzici zezinongo, ububanzi, izinzuzo kanye nokuphikisana kokusetshenziswa, funda ngezansi. Incazelo ye-badyan Badyan, ingokwezihlobo zezitshalo zezimbali, umndeni wakwaLimonnikovyh. Lesi sitshalo sihlahla esihlala sivame, sifinyelela ukuphakama kwemitha eyi-10.
Izici zokusetshenziswa kwesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi ngesikhathi sokukhulelwa
Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi siyingxenye ebalulekile yokudla okunomsoco okunempilo efanele. Kodwa-ke, akuzona zonke ezicacile - izinzuzo zomkhiqizo ngesikhathi sokukhulelwa zibuzwa. Uma ngabe imifino iwusizo kwabesifazane abakhulelwe, funda kabanzi kulesi sihloko. Ukwakhiwa kwesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi Ngesikhathi ukudla kudla izimpande kanye neziqu zesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi. Izakhi zabo zamakhemikhali ziyahlukahluka.
Ukukhanyisa okunethezeka noma kuphi kanye ne-generator
Ama-generator e-petroli athandwa kakhulu phakathi kwabasebenzisi ezindaweni ezingenakho ukutholakala kwamanje kagesi. Uma i-cottage isendaweni edolobheni noma endaweni ekhona ukuphuma kwamandla, isixazululo sizoba ukusebenzisa i-generator ye-petroli. Idivaysi yamahora amaningana inikeza okwamanje okuqhubekayo, into esemqoka ukukhetha okukhethwa kukho kuncike kuye ngezidingo.
Isitshalo sezindlu esimangalisayo okuthiwa u-begonia Diadem - incazelo, izici zokunakekelwa nokukhiqiza
I-Begonia Diadem iyisitshalo esingapheli esibheka njenge-shrub enhle ngamaqabunga amangazayo, okuyinto lezi zinhlobo ezithola igama layo, ngoba ubuhle bayo buyohlobisa noma yiliphi igumbi langaphakathi noma ingadi yangaphambili. Kulesi sihloko uzofunda ngezici ezihlukile ezihlukahlukene ezivela kwezinye izinhlobo ze-begonias.
Ungakhula kanjani u-begonia ophuzi futhi uwunikeze ngokunakekelwa okufanele ekhaya? Isithombe kanye nencazelo yezinhlobonhlobo
I-Begonias ikhona ngobuningi kangangokuthi ngisho nabalimi abanolwazi ngezinye izikhathi badideka ekubukeni. Lesi sihloko sizoxoxa nge-begonias ephuzi. Silungiselele ulwazi ukuthi lezi zimbali ziyizi, ukuthi zingabanakekela kanjani, zande, ziyini izinhlobo ze-nuances kanye nobuqili obuwusizo kumthandi wezitshalo zangaphakathi.
Imiyalo kanye nezincomo ezisebenzayo zokutshala i-gardenia ezivela imbewu ekhaya
I-Gardenia yisitshalo esishisayo esingenalo idumela elihle kakhulu lokukhula ekhaya. Izindlela eziyinhloko zokuzalanisa i-gardenia yizinhlamvu nokuhlanganiswa. Ngokushesha kufanele kuqaphele ukuthi ekhaya indlela yokulima cishe ayithembi. Inqubo yokuzalisa imbewu ye-gardenia inzima kakhulu, ngoba lesi sitshalo sinemvelo enhle.